Kuchera cryptocurrencies uye Bitcoins mugore - Ita mari kuchera | Gadget nhau
Cryptocurrency kuchera, tsvaga maitiro ekuita mari kuchera mugore
Michael Gaton | | Cryptocurrencies, Software, Technology
Kana iwe uchifarira invest in in cryptocurrencies uye haudi kushandisa mari pazviri tenga Bitcoins, Ethereum kana imwe mari yakanangana, ipapo imwe sarudzo inogona kunakidza ndeyemigodhi. Iyo cryptocurrency kuchera Iyo ndiyo yakasarudzika nzira iyo mashandisirwo anosimbiswa pane blockchain; Asi kuti unzwisise zvirinyore nenzira yakapusa zvayinosanganisira, tinogona kutaura kuti inzira inoshandiswa nekombuta kutsaurira akateedzana emakomputa zviwanikwa uye nekudzoka anogamuchira mubhadharo mumakristcheni. Kana iwe uchida kuona maitiro ekuchera mari munzira inobatsira uye kubva mugore, saka ramba uchiverenga ichi chinyorwa.
1 Cryptocurrency kuchera, imwe nhoroondo
2 Cloud kuchera
3 HashFlare, zvangu bitcoins zviri mugore
4 Maitiro ekuchera sei mari yemadhora paHashflare?
Cryptocurrency kuchera, imwe nhoroondo
Makore apfuura zvaigoneka yangu Bitcoins kana mamwe ma cryptocurrencies nenzira yakapusa kubva kumba uye kudyara mashoma zviwanikwa padanho rehardware. Chero komputa yaikwanisa kuchera mari yesimbi nenzira inobatsira uye nekudaro vamwe vanhu vakasarudza kuisa mari mumakina kuchera kubva kumba neimwe nzira kana zvishoma amateur. Parizvino izvi hazvichakwanisika, kuonekera kwe midziyo yakanyatsogadzirirwa kuchera yemari pamwe nekuwedzera kuoma kweiyo algorithm yekumigodhi inoita kuti ive isingabatsiri kuchera nenzira iyi nhasi - zvirinani kune dzakajairika mari senge Bitcoin, Ether, ... - uye kuti musika unotongwa nemakambani makuru avanopa zviwanikwa zvakakura kune iri basa.
Uye kwete chete isu tine iyo yekumisikidza chinhu pamutengo weiyo Hardware, isu zvakare tine zvimwe zvisingakwanisike se:
El kuwedzera kuoma: kuoma kwemigodhi Bitcoins kunowedzera mwedzi nemwedzi, saka zviri kuramba zvichidikanwa kuve nemagetsi akawanda emagetsi kuti ndikwanise kuchera maBitcoins zvinobatsira.
El simba remari: mari yemigodhi inzira inoshandisa magetsi akawanda, ndosaka iri kubatsira zvakanyanya munyika idzo dzine magetsi anobatsira, seChina, Iceland, nezvimwe.
La tembiricha yezvakatipoteredza: mapurosesa anoburitsa huwandu hukuru hwekupisa apo uchichera uye isu tinoda kudzima iwo kupisa; nokudaro kuchera munyika dzine kutonhora kwemamiriro ekunze kunoderedzawo mutengo.
Nezvikonzero izvi - uye nevamwe - nhasi chikamu chikuru chemigodhi yemari yemari inoitwa munyika dzakaita seChina, Iceland, Finland, nezvimwe.
Sezvatatotaura, kuchera cryptocurrencies zvakananga kubva kumba hakubatsiri izvozvi. Zvakanaka, chaizvo, zvinogona kubatsira chero bedzi isu tichitsvaga izvo zvichangobva kugadzirwa zvemari zvemadhora izvo zvisinganyatso kuzivikanwa uye izvo zvichiri kubvumidza kuchera kubva kune yakaderera-simba Hardware, asi iri imwe nyaya yandaizopa yechimwe chinyorwa chakakura kwazvo. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve kucherwa kwema main cryptos uye kuti izvozvi kubva kumba hazviite.
Saka handichakwanise kuita mari yekuchera Bitcoins futi? Zvakanaka mhinduro ndeyokuti, nekuda kwechinozivikanwa se kuchera kwegore o cloud mining. Pfungwa ndeyekuti makambani achangobva kuoneka anogadzira macomputer emari ekuchera mari munyika uye nehunyanzvi hwesoftware, zvichiita purofiti uye makambani aya anokupa iwe mukana wekuhaya masevhisi avo kuti ave neyako kure kure. Nenzira iyi iwe unogona kuve neyako Bitcoins yekuchera sisitimu uye iwe unongofanirwa kubhadhara muripo, kudzivirira kudzivirira manejimendi zvakananga.
Parizvino pane makambani akati wandei anopa masevhisi aya asi iwe unofanirwa kungwarira kana uchisarudza imwe nekuti pane zvimwe zviitiko zvemakambani zvave chitsotsi izvo zvichitevera chirongwa chepiramidhi chakabiridzira mari kubva kune vatengi vadzo. Isu tinokurudzira Hashflare, inova kambani yanga ichishanda zvakanaka kwemakore mashoma zvichiratidza kuti ikambani irimo unogona kuvimba uye chii iyo yakakwira makore emigodhi purofiti Kubva kumusika.
HashFlare, zvangu bitcoins zviri mugore
hashflare Ndicho gore rekuchera system Ivo vanopa iyo yekuchera sisitimu ine michina yakaiswa muIceland, ichiwana yakakwira purofiti nekuda kwemutengo wakaderera wesimba muIceland nemamiriro ayo ekunze anotonhora anovabvumira ivo kuchengetedza mari zhinji kana zvasvika pakubvisa kupisa kubva kumidziyo yekuchera. Ivo parizvino vanobvumira kucherwa kweBitcoins, Ethereum, Litecoins uye Dash.
Iwe unoda kuchera yangu Bitcoins?
Dzvanya HERE kumigodhi Bitcoins
Maitiro ekuchera sei mari yemadhora paHashflare?
Kunyangwe zvingaite senge zvakaoma, mari yemigodhi neHashflare iri nyore kwazvo. Iwe unongofanirwa kutevera anotevera matanho:
1.- Dzvanya apa uye nyoresa muHashFlare
2.- Kamwe mukati unofanira tenga iyo yekuchera system. Pano une akawanda maalgorithms akasiyana kumigodhi imwe kana imwe cryptocurrency. Zvimwe zvinobatsira kupfuura zvimwe, asi tinokurudzira kuti iwe tenga iyo SHA-256 algorithm uye yangu Bitcoins.
3.- Sarudza huwandu chii chaunoda kuisa mari mumadhora. Unogona kuchera kubva pamadhora 1,5 kusvika pamadhora akakwirisa emadhora zviuru gumi nezvishanu. Pano zvinoenderana nezviwanikwa zveumwe neumwe uye nemarii yaunoda kuisa mumigodhi.
4.- Ita mubhadharo. Iwe unogona kubhadhara neBitcoins asi kana iwe uri asiri-epamberi mushandisi mune cryptocurrencies iwe unogona zvakare kuzviita zvakananga nedzimwe nzira dzechinyakare senge kufambiswa kwebhangi kana kiredhiti kadhi. Kana iwe ukashandisa kiredhiti kadhi, iwe uchafanirwa kuverengera kubhadhara kwacho gare gare nekuratidza kodhi iyo inosanganisirwa mutero yako pakadhi, saka zvinogona kutora mazuva mashoma.
Uye ndizvozvo, unogona kutanga kuchera Bitcoins uye wana mari mwedzi nemwedzi pasina kuita chero chimwe chinhu.
Mune yako HashFlare pani une ruzivo kwaungaona mari inowanikwa zuva nezuva, fungidziro yemari yezuva rimwe, svondo rimwe, mwedzi mumwe, mwedzi mitanhatu uye gore rimwe chete kuti iwe uone kuti mari yako inobatsira sei.
Paunenge uchinge waunganidza Bitcoins muaccount yako unogona:
Dzorera zvakare akadaro bitcoins mukutenga kwesimba rekuchera muHashflare kuitira kuti kukura kwekudyara kwako kuve kwakakura.
Darika aya maBitcoins kuchikwama chako kwaunogona kuzvichengeta kana shandura iwo kuma euro kana madhora uye kubva ipapo ugoenda nazvo kubhengi rako.
Sezvauri kuona, kuchera mari yemadhora kubva pagore iri nzira yakatwasuka. Kutenda kumapuratifomu akaita seHashflare unogona kuisa mari kubva ku $ 1,5 uye tanga kuchera pasina kutora matambudziko akaoma sekutenga michina yakasarudzika, kumisikidza masisitimu, kuisa algorithm yemigodhi, ... zvese izvi zvinoitwa ne hashflare kwauri. Iwe unongofanirwa kusarudza kuti yauri kuzotsaurira zvakadii kune iyo mari, tenga simba rekuchera uye ndizvozvo. HashFlare ndiye ari kutarisira kuita kuti purofiti yako ive yakanakisa, kutanga kushanda navo rangarira izvo unofanira chete tinya pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Cryptocurrency kuchera, tsvaga maitiro ekuita mari kuchera mugore
Jose Luis Urena Alexiades akadaro
Chinyorwa chisina basa. Kufungidzira kusine zvibereko, uye pamusoro ne cryptocurrencies opaque kuhupfumi. Inonyanya kukodzera Mafia pane vanhu vane mutoro.
Pindura kuna Jose Luis Ureña Alexiades
Gadget nhau akadaro
Mhoro Jose Luis Ureña Alexiades. Ndine urombo kuti haufarire chinyorwa ichi, ichokwadi kuti mari yemadhora mari ine njodzi uye ndiyo nzira yavanofanira kutorwa (mumigodhi njodzi yacho yakaderera nekuti zviri pachena kuti iriko). Ehe hongu, isu hatitende kuti iwo musika weiyo mafia; Zvinogona kunge kune zvikwata zvinobatanidzwa muchikamu ichi nekuda kwekusazivikanwa mabhenefiti ainopa asi kune zvakare chikamu chakakomberedza nyika ye blockchain iyo inoumbwa nevanhu vakajairika. Blockchain iri kuzoita nhanho kubva ku "internet yeruzivo" kuenda ku "internet yekukosha" uye kana kugona kwayo kuchisimbiswa, zvinokwanisika kuti isu takatarisana neshanduko ingori shanduko sekuuya kweinternet. Kwazisai uye nekutenda nekuverenga kwedu
Pindura News Gadget
Hurumende nemabhangi vanofunga zvakafanana, mitero nemakomisheni anowanzoitika uye ivo varipo mukutengeserana pakati pavo Mabhangi neHurumende kuseri kwemushure memutengi webhangi uyo asingazive kana asina tsananguro yekuti sei vachibhadharisa makomisheni akawanda kudaro mukutamisa pakati pemari. Cryptocurrency ndeimwe nzira uye iri kuwedzera kushanda uye nyika haigone kubva pairi.
Pindura kuna Añ
Omar valfre akadaro
José anoda kuverenga zvakawanda
Pindura kuna Omar Valfre
Oscar Lopez akadaro
Saka makambani aya, pachinzvimbo chekuzvichera ivo nekupfuma, vanotengesa iwe kuchera kuti iwe upfume? Ehe saizvozvo. Izvi zvakafanana neizvo zvinokutengesera makosi / mabhuku kuti iwe ugone kupfuma kuisa mari mumusika wemasheya XD
Pindura kuna Oscar López
Michael Gaton akadaro
Zvakanaka, ivo vanochera dhongi mwedzi zvakare. Chii chinoitika ndechekuti pamusoro pekuchera vanokupa kuti ubhadhare michina yavo kuti ugone kuchera.
Ini ndinoiona senzira yekusiyanisa mari yavanowana, imwe% yezvemigodhi uye imwe% yekubhadhara midziyo.
Pindura Miguel Gaton
Ndine kusahadzika nezve chikuva icho chisina kujekerwa kwandiri muchinyorwa. Unogona kundipindura here? Ndatenda:
1.- Simba raunoroja, rinoburitsa zvakadii? Unogona kuziva usati watenga?
2.- Zvakakosha here kuve nepamhepo kana pasipo chikwama kuti ukwanise kubvisa ako bitcoins?
3.- Chii chinonyanya kukurudzirwa, isingawanikwe kana imwe online?
Kutenda uye nezve zvese, Antonio
1.- Mune iyo Hashflare pani pachayo inobvumidza iwe kutevedzera izvo iwe zvaunogadzira pazuva nezuva nechero chibvumirano simba
2.- Ehe, iwe unofanirwa kuve uine bitcoin chikwama kuti ubvise izvo zvinogadzirwa. Kana iwe ukaita yangu Ether iwe unenge uchida Ether chikwama.
3.- Padanho rekuchengeteka, isingaverengeki yakachengeteka zvakanyanya asi zvakare zvakaomarara kubata. Mukupedzisira, ini ndaizofunga imwe kana imwe zvichibva pane yako mari. Kana iwe uchizoisa yakaderera investa saka ini ndinofunga yepanyama imwe haina kukosha, kana iwe uchizopa mari zvakanyanya hongu.
Ndatenda nekundipindura Miguel.
Joseph Gonzalez akadaro
Mhoroi, ndangoverenga chinyorwa chenyu nezve cryptocurrency kuchera mugore uye neHashFlare ndotenga iyo SHA-256 algorithm neyangu Bitcoins kudzamara ndazojekesa izvo zvandisinganzwisise nezve iyo $ 1,50 ndiyo yandinayo inobhadhara zuva nezuva kana pagore kana ndikaibata. Ndatenda zvikuru joseph
Pindura kuna Jose Gonzalez
Nyama nemapfupa anozomutsazve nekukurumidza nekuda kweiyi nyowani kurapwa
Maitiro ekudzima ako ese maemail account